Ogaden News Agency (ONA) – EPRDF/TPLF oo Baajisay Munaasabad Larabay In Lagu Taageero Doorashadii Beenta Ahayd ee Bishii Hore Laqabtay.
EPRDF/TPLF oo Baajisay Munaasabad Larabay In Lagu Taageero Doorashadii Beenta Ahayd ee Bishii Hore Laqabtay.
Posted by ONA Admin	/ June 10, 2015
Warar gaar ah oon kahelayno magaalada Addiss Ababa ayaa sheegaya in labaajiyay munaasabad lagu waday in laqabto 13/6/2015, oo ladoonayay in lagu taageero natiijadii kasoo baxday doorasho kusheegtii Itoobiya bishii lasoo dhaafay kadhacday. Munaasabadan ayaa waxaa soo qabanqaabiyay kooxda Itoobiya ku amar kutaaglaysa ee layidhaahdo EPRDF/TPLF taasoo ay doonayeen in fashilkii iyo fadeexadii karaacday doorashadii beenta ahayd lagu marin habaabiyo beesha caalamka oo ku baraarugsan ineeysan doorasho xor ah kadhicin Itoobiya.
Waxaa xusid mudan ineeysan doorashadan kasoo qaybgalin wax goobjooge yaal caalami ah. Sidoo kale Marwo Ana Gomes oo uhadashay Baarlamaanka Midawga Yurub ayaa sheegtay ineeysan wax goobjooye ah oo Midawga Yurub kasocda aysan kaqaybgalaynin doorashadan beenta ah.
Sida ay wararku shegayaan wareegto kasoo baxday xafiiska Ra’iisul wasaaraha magac uyaalka ah ee Hailemariam Desalegn ayaa shirkan lagu joojiyay. EPRDF ayaa kabaqday in hadii munaasabadan kadhacdo guud ahaan wadanka oo idil ineey isu badali karto mudaaharaadyo lagaga soo horjeedo maamul kusheegya talada haya sidaas darteed ayeey go’aansadeen in munaasabadan lagu qabto oo kaliya Garoonka Kubada Cagta ee magaalada Addiss Ababa 24/6/2015. Si’eey dadka kasoo qaybgala iridaha ooga istaagaan ooysan wax abaabul ah oo iyaga kadhan ah usamaynin shacabku.
Isbahaysiga EPRDF ayaa xaqiiqsaday ineeysan awoodi karin isla markaana garwaaqsaday ineeysan talo gacantooda kujirin shacabkii Itoobiyana ay gabi ahaanba kasoo istaageen maamulka gabalkiisu dhacay ee EPRDF/TPLF hormuudka utahay.
Shucuubta kuhoos jirta Gumaysiga Itoobiya ayaa kubaraarugsan gabood fallada iyo hagardaamada joogtada ah eey kuhayaan ciidamada huwanta ah ee ka amar qaata kooxda TPLF. Shacabka Somalida Ogadenya ayaa halgan adag kala hortagay maamulka wayaanaha ee dhibaatooyinka naxariis darrida ah kuhaya bulshada rayadka ah ee Somalida Ogadenya.